समिति पुनरावलोकनको अडानबाट सुनुवाइ तर्फ-NepalKanoon.com
समिति पुनरावलोकनको अडानबाट सुनुवाइ तर्फ
जेठ ५, काठमाडौं । सत्तासाझेदार एमाले र बिपक्षी एमाओवादीले आठ न्यायाधीश सिफारिस पुनरावलोकनको लागि न्याय परिषदमा फिर्ता गर्नुपर्ने पूर्व अडान त्यागेका छन्।
न्याय परिषद्को सिफारिस कानून अनुसार नै अवैधानिक र अपूर्ण भएको अडानबाट उनीहरु पछि हटेपछि संसदीय सुनुवाई अघि बढ्ने भएको छ।
न्याय परिषद्ले वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको लागि आठ जनाको सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिस प्रकृयादेखि प्रस्तावितको उपयुक्तताको विषयमा एमाले, एमाओवादी र केही साना दलले चार सातादेखि पार्टीभित्र र संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा कडा अडान लिँदै अाएका थिए।
सुनुवाई समितिको सोमबारको बैठकमा एमाले र एमाओवादीका सदस्यहरुले समितिको निर्णय सहमतिमा गर्ने थिती कायम राख्न पुनरावलोकनको अडानबाट पछि हटेको बताए।
‘न्यायाधीशको सिफारीस उपयुक्त छैन भन्ने नै हाम्रो धारणा हो,’ एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘दलहरुबीच सहमतिको राजनीति कायम राख्न हामी सिफारिस फिर्ता पठाउने अडानमा लचक हुन तयार भएका छौं।’
समितिको बैठकहरुमा एमाओवादी सदस्यहरुले सिफारिसमा भएका कमजोरीलाई बुँदागत रुपमा उठाउँदै फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए।
किन छानिछानी योग्यलाई पाखा लगाइयो र अयोग्यलाई ल्याइयो? स्थायी र अस्थायी गरी पन्ध न्यायाधीश खाली हुँदाहुँदै अड्कलेर किन आठ मात्र सिफारिस गरियो? सिफारिस किन समावेशी र समानुपातिक भएन? न्यायपरिषद् सदस्य रामकुमारप्रसाद साहले आपत्ति प्रकट गर्दागर्दै किन अपूर्ण निर्णय गरियो?
एमाओवादीका टोपबहादुर रायमाझी, अग्नि सापकोटा, प्रभु साह लगायतले सिफारिसमा परेका कतिपय न्यायाधीशको पृष्ठभूमि र छबिलाई पनि मुद्दा बनाउँदै आएका थिए।
सोमबारको बैठकमा एमाओवादीका तर्फबाट पोखरेलले न्यायाधीशहरुको सिफारीसको आधार र कारणबारे जनाकारी मागेर न्याय परिषद्लाई अनुरोधात्मक पत्र पठाएमा राजी हुने धारणा राखे।
न्यायाधीश सिफारिस फिर्ता हुनुपर्ने भनेर हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको एमालेले पनि त्यो अडान छाडेको छ। उसले पनि न्याय परिषद्ले संसदीय सुनुवाई समितिलाई लेखेको पत्रमा आपत्ति प्रकट गरेर ‘ध्यानाकर्षण गराए’को भरमा चित्त बुझाएको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र सिफारिसका विषयमा यसअघि चारवटा बैठक भइसकेको छ। सोमबार दुई प्रमुख दल नरम भएपछि सिफारिस फिर्ता गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी एक्लो जस्तो भएका छन्।
‘यो भ्रष्ट न्यायाधीश सर्वोच्च पठाउने की नपठाउने भन्ने विषय हो,’ केसीले भने, ‘राष्ट्रिय जनमोर्चा जेसुकै नाममा आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने पक्षमा छैन।’
न्यायपालिकाको मुहान नै सफा नभएकोले यस्तो विकृति आएको धारणा केसीले व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्।
सत्ता र कानून न्याय मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको अडानलाई सप्ठेरो पर्ने गरी एमाले र एमाओवादी नरम भएपनि सोमबार साँझसम्म पनि निर्णयको ‘ड्राफ्ट’का विषयमा सहमति भएको छैन।
सोमबारको बैठकमा न्यायपरिषद्सँग समितिलाई लेखेको प्रतिउत्तरबारे ध्यानाकर्षण र सिफारिसका आधारका कारण माग गर्ने मोटामोटी सहमति भएको थियो। यसको मस्यौदा गर्न कांग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ तथा यज्ञबहादुर थापा, एमालेका भीम रावल तथा राजेन्द्र पाण्डे, एमाओवादीका पोखरेल र साह लगायतको अनौपचारिक समूह बनेको थियो।
थापाले दिएको जानकारी अनुसार भाषा र अन्तरवस्तुका विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन। ‘भोलि बिहान मात्र टुंगो लाग्ला जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने।